တော့တင်ဟမ် ပရိတ်သတ်တွေကို တောင်းပန်လိုက်ပြီး ယူနိုက်တက် မှ ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပြီးနောက် သူ့ဘဝရဲ့ အခက်ခဲဆုံး အခိုက်အတန့်ကို ပြောပြလိုက်တဲ့ မော်ရင်ညို - SPORTS MYANMAR
တော့တင်ဟမ် ပရိတ်သတ်တွေကို တောင်းပန်လိုက်ပြီး ယူနိုက်တက် မှ ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပြီးနောက် သူ့ဘဝရဲ့ အခက်ခဲဆုံး အခိုက်အတန့်ကို ပြောပြလိုက်တဲ့ မော်ရင်ညို
ဟိုဆေးမော်ရင်ညို က မနေ့ညက ၀က်ဟမ်းကို သူ့ရဲ့ အသင်း အနိုင် ရရှိ ခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ် ပြီးနောက် အဝေးကွင်းကို လိုက်လံ အားပေးခဲ့တဲ့ တော့တင်ဟမ် ပရိတ်သတ်တွေ ရှိတဲ့ away section နားကို မသွား ခဲ့တဲ့ အတွက် ပရိတ်သတ်တွေကို တောင်းပန် လိုက်ပါတယ်။ ယခုတစ်ပတ် မာရီစီယိုပိုချက်တီနို ရဲ့ နေရာ ကို အစားထိုး ၀င်ရောက် လာခဲ့တဲ့ မော်ရင်ညို အတွက် အဖွင့် လှပခဲ့ပြီး တော့တင်ဟမ်ဟာ လန်ဒန်စတေဒီယမ် မှာ ၀က်ဟမ်း ကို ၃ ဂိုး ၂ ဂိုး နဲ့ အနိုင် ရရှိ ခဲ့ပါတယ်။
ဆွန်ဟောင်မင်း ၊ လူးကပ်မော်ရာ တို့ဟာ ပထမပိုင်းမှာ စပါး အတွက် ဂိုးတွေ သွင်းပေး ခဲ့ပြီး ဟယ်ရီကိန်းဟာ ဒုတိယပိုင်း ၄၉ မိနစ်မှာ ထပ်သွင်း ပေးခဲ့တာကြောင့် ၃-၀ နဲ့ ဦးဆောင် နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အိ်မ်ရှင် အတွက် အန်တိုနီယို က ပထမ ချေပဂိုး သွင်းပေးခဲ့ပြီး နာကျင် အချိန်ပိုမှာ အော့ဘွန်နာ က နောက်တစ်ဂိုး ထပ်သွင်း ခဲ့ပေမယ့် အချိန် မမှီ တော့ပါဘူး။
အဆိုပါ ပွဲပြီးနောက် စပါး ကစားသမား တွေဟာ အဝေးကွင်းကို လိုက်ပါ အားပေးတဲ့ စပါး တွေဆီ သွားကာ လက်ခုပ်တီးခြင်း ၊ အကျီလက်ဆောင်များ သွားပေးခြင်း တို့ကို ပြုလုပ် ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မော်ရင်ညို ကတော့ အဝေး ကနေသာ ပရိတ်သတ် တွေကို လက်ခုပ်တီး ခဲ့တာကို တွေ့ခဲ့ ရပါတယ်။
ဒါနဲ့ ပက်သက်ပြီး မော်ရင်ညိုက စပါးတီဗီ သို့ ရှင်းပြ ခဲ့ရာမှာ “ပွဲအပြီးမှာ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ ပရိတ်သတ် တွေဆီကို မသွားချင် ခဲ့ပါဘူး။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော် မသွားသင့်ဘူးလို့ ခံစား မိလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကစားသမားတွေ အတွက်သာ ဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော့် အတွက် မဟုတ် ပါဘူး။
ကျွန်တော် အဝေးမှာသာ နေခဲ့တဲ့ အတွက် တောင်းပန် ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အသင်းကို လိုက်ပါ ပံ့ပိုး ပေးခဲ့တဲ့ ဒီပရိတ်သတ် ထောင်ဂဏန်းကို ကျွန်တော် လေးစား ပါတယ်။ ကျွန်တော် ဒါကို တကယ် ကြည်နူးနေပြီး လိုက်ပါ အားပေးရတဲ့ အခက်အခဲ တွေကိုလည်း ကျွန်တော် နားလည် ပါတယ်။ အခု ဆိုရင် ပရိတ်သတ် တွေလည်း ကျွန်တော်တို့လို ပျော်ရွှင် နေကြ နိုင်ပါတယ်။” လို့ ဆိုလိုက် ပါတယ်။
မော်ရင်ညို က စပါးတို့ ရခဲ့တဲ့ ဒုတိယဂိုး ဟာ ယခုတစ်ပတ် လေ့ကျင့်ရေး အစီအစဉ် မှာ လူးကပ်မော်ရာ ရဲ့ နေရာယူမှု အပိုင်း အလုပ်လုပ် ခဲ့ခြင်းရဲ့ တိုက်ရိုက် အကျိုး ရလဒ် ဖြစ်တယ်လို့ ထုတ်ဖော် သွားပါတယ်။
မော်ရင်ညို က “ဒီဂိုးဟာ ပြင်းပြတဲ့ ဆန္ဒ ကြောင့်ပဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ လေ့ကျင့်ရေး အစီအစဉ် မှာ လုပ်ခဲ့တဲ့ အရာကြောင့်ပါ။ လေ့ကျင့်ရေး ကွင်းမှာ ရွေ့လျားမှုပိုင်း နဲ့ ဆိုင်ရာ အရာတွေ လုပ်ခဲ့တဲ့ အတွက်ကြောင့် လူးကပ်ဟာ ဒီနေရာကို ရောက်လာ ခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော် နဲ့ ကျွန်တော့် ၀န်ထမ်းတွေ ဒီလို လုပ်ဖို့ အကြောင်းကို တွေးခဲ့ ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဒါကို လေ့ကျင့်ခဲ့ ပါတယ်။ ကွင်းထဲမှာ ဒီလို ဖြစ်ခဲ့တာ ကတော့ နည်းပြ တစ်ဦး ရနိုု်င်တဲ့ အကောင်းဆုံး ခံစားချက် ပါပဲ။” လို့ ဆိုသွား ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး တော့တင်ဟမ် နည်းပြက ယူနိုက်တက် ကနေ ထွက်လာ လာခဲ့ပြီးနောက် မန်နေဂျာ ဘဝ နဲ့ ဝေးကွာ နေရတဲ့ အချိန်အတွင်း သူ့အတွက် ခက်ခဲမှုတွေ ရှိခဲ့တယ်လို့ ၀န်ခံ လိုက်ပြီး လက်ရှိ မှာတော့ သူ့ရဲ့ သရုပ်မှန်ကို ရခဲ့ပြီလို့ ပြောခဲ့ ပါတယ်။ အသက် ၅၆ နှစ် အရွယ် နည်းပြဟာ ယူနိုက်တက် နဲ့ ရလဒ်တွေ ဆိုးရွား ခဲ့တာကြောင့် ဒီဇင်ဘာလ အထုတ်ပယ်ခံ ခဲ့ရပြီး နည်းပြ လောက နဲ့ ၁၁ လကြာ ဝေးကွာ နေခဲ့ရ ပါတယ်။
မော်ရင်ညို ဟာ ဒီကာလအတွင်း စကိုင်းစပေါ့ရဲ့ ဘောလုံး အစီအစဉ် သုံးသပ်သူ အဖြစ်လည်း လုပ်ကိုင် ခဲ့ပြီး ပေါ်တူဂီ နည်းပြက ဒီကာလ အတွင်း ဘောလုံးပွဲ တွေကို အပြင်ကနေသာ ကြည့်နေရတဲ့ အတွက် ခက်ခဲမှု ရှိခဲ့တယ်လို့ ပြောသွား ပါတယ်။
မော်ရင်ညို က “၀န်ခံ ရရင် ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၁ လ အတွင်း ကျွန်တော့် အတွက် အခက်ခဲဆုံး အခိုက်အတန့်တွေ ကတော့ နွေရာသီ ကာလ ဖြစ်ပြီး ကျွန်တော် ရာသီကြို ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်ဖို့ မရှိ ခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ အခြား မန်နေဂျာတွေ နဲ့ ကလပ်တွေ ရာသီကြို ပြင်ဆင်မှု လုပ်နေတာကိုပဲ ထိုင်ကြည့် နေခဲ့ ရတာပါ။ အရမ်း ထူးဆန်းတဲ့ ခံစားချက် ကတော့ ကျွန်တော် ဘောလုံးကွင်းတွေ သွားတဲ့ အခါ တစ်ခါတစ်ရံ ‘ငါဒီမှာ ဘာလာလုပ်တာလဲ?’ ‘ငါ Sky studio အခန်းထဲမှာ ဘာလုပ် နေတာလဲ?’ ဆိုပြီး တွေးမိ ခဲ့ပါတယ်။ အထူးဆန်းဆုံး ခံစားချက် ပါပဲ။
အခုဆိုရင် ကွင်းထဲက နည်းစနစ် ဧရိယာကို ကျွန်တော် ပိုင်သွား ခဲ့ပြီး ကျွန်တော် ရှိသင့်တဲ့ နေရာကို ပြန်ရောက် လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ သရုပ်မှန်ပါ။ ခံစားချက်တွေ လွန်ကဲ ခဲ့လား? No ပါ။ ကျွန်တော် တုန်လှုပ်ခဲ့လား? No. ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ဒါကို ချစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကိုယ့်ရဲ့ ညွှန်ကြားချက် အတိုင်း ဖြစ်လာတဲ့ အခါပေါ့။ အမှန်ပါပဲ။ ဘောလုံးမှာ အကောင်းဆုံး အရာကတော့ နိုင်ပွဲတွေ ရဖို့ပါပဲ။” လို့ ဆိုသွား ပါတယ်။